Guuleed Alves Iyo Siciid Bulshaawi Oo Ka Tagay Xulka Gobolka Daad-Madheedh Iyagoo Sharaxay Sababta Keentay Tagitaankooda
HomeWararka MaantaGuuleed Alves Iyo Siciid Bulshaawi Oo Ka Tagay Xulka Gobolka Daad-Madheedh Iyagoo Sharaxay Sababta Keentay Tagitaankooda
Labada ciyaartooy Ee Guuleed Cabdi Muxumed (Guuleed Alves) iyo Siciid Cabdikariin C/Laahi (Siciid Bulshaawi) ayaa sheegay inay katageen Gobolka Daad-Madheedh oo ay kamid ahaayeen muddo sannado ah. Labadan ciyaartooy oo lasoo xidhiidhay wargeysa Geeska Afrika ayaa noo cadeeyey inay katageen gobolkii ay u safan jireen Ee Daad-Madheedh iyagoo labadooduba sheegeen sababo kala duwan oo midkastaa uga tagay kamid ahaanshaaha kooxda Gobolka Daad-Madheedh Ee uu katirsanaa.
Guuleed Alves ayaa isagu sheegay inuu uga tagay gobolka Daad-Madheedh kadib markii qaar kamid ah maamulka gobolku ay faro-galin ku sameeyeen booskiisa gobolka Daad-Madheedh uu uga ciyaarayey tan iyo markii tartanka goboladu socdeen.
Guuled Alves oo kamid ahaa ciyaartooyadii kasoo ciyaaray wadanka Abkhazia ee matalayey Xulka Qaranka Somaliland, badhtamihii sanandkana kaqayb galay koobka adduunka ee wadamada aan la aqoonsan, ayaana ka ciyaara baasha midig difaaca isagoo katirsan kooxda heerka koowaad ee Goodir. Waxaanu xidigani sidoo kale noo cadeeyey inuu jiray khilaaf kadhex oognaa isaga iyo Maamulka iyo Tobobaraha kooxda Gobolka Daad-Madheedh, taasina keentay inuu katago kooxda kubada cagta ee Gobolka Daad-Madheedh ee uu katirsanaa.
Dhanka kale, Siciid Cabdikariin C/Laahi oo kumagac dheer Siciid-Bulshaawi ayaa ku sababeeyey tagitaankiisa kadib markii kooxdiisa Gobolka Daad-Madheedh ee uu katirsanaa aanay waxba la qaban kadib markii uu jabay kulankii gobolka Saaxil iyo Daad-madheedh ee koobkii gobolada JSL. Bulshaawi ayaana sheegay in xataa dhawr balamood ay maamulku kaga baxeen isaga.
“waxaan go’aankan gaadhay kadib markii Gobolkii aan u ciyaarayey ee Daad-Madheedh waxba iiga qaban Markii aan Jabay anigoo u ciyaarayey, kulankii Saaxil ee koobkii Gobolada JSL, haday tahay Maamulka gobolka, Xildhibaanada iyo Kooxdaydaba waxba iigumay tarin anigoo dartood u jabay”. Sidaas ayuu yidhi Siciid oo kawaramayey Sababta uu iskaga casilay xulka gobolka Daad-Madheedh.
Ciyaartooyga Siciid Bulshaawi ayaa kooxda gobolka Daad-Madheedh uga safan jiray garabka bidix ee weerarka, waxaanu ku dhaawacmay kulankii gobolka Saaxil Rikoodhayaasha uga badiyey Gobolka Daad-Madheedh, kulankaasi ayaana ugu dambeeyey wax ciyaara oo Siciid u safto Gobolka Daad-Madheedh tan markii uu kusoo biiray.
Mar’aanu wax kawaydiinay sababta keentay go’aankan wada-jirka ah ee labadan ciyaartooy gaadheen ayaa waxa uu Siciid noo cadeeyey inay labadoodu iskaga dhawaayeen, oo Guuleed ahaa ciyaartooyga tan iyo maalinkii uu Jabay isagu kawar hayey ee la joogay mudadaasi. Ciyaartooyadan hore oo u safanayey xulka gobolka Daad-Madheedh mudo sannado ah ayaana ilaa hadda sheegin gobolka ay ku biiri doonaan kadib iscasilaadoodan, iyagoo tilmaamay inaanay hadda wax go’aana ka gaadhin arintaasi.